Isra'iil oo 70 jirsatay: Daawo toddobo sawir oo taariikhi ah - BBC News Somali
Toddobaatankii sanno ee lasoo dhaafay Israa'iil waxaa soo maray toddobo dhacdooyin waawayn oo taarikhda gashay.
Israa’iil waxay xusaysaa 70 sannad guuradii kasoo wareegtay xilligii xornimadeeda. 14-tii bishii May ayay Israa’iil xoriyadda qaadatay. Dalal badan oo Carbeed ayaa ka hor yimid arrintaasi, maalinkii ku xigtayna weerar aaa lagu qaaday.
Kummanaan reer Falastiin ah ayaa ka qaxay guryahooda dagaallada awgood, ka dib asaaskii Israa’iil, Ku dhawaad 600,000 oo qaxooti Yahuud ah oo dalalka Carabta ku sugnaa ayaa u guuray Israa’iil-ta cusub
Sannadkii 1961 waxaa maxkamad Israa’iil lagu saaray mid kamid ah saraakiisha ugu sarraysa Naasiyinta Adolf Eichmann, sannadkii 1962 ayaa daldalaad lagu fuliyay.
David Rubinger / Getty Images
Dagaalkii Sannadkii 1967 waxaa uu saamayn ku yeeshay bariga dhexe, Israa’iil waxay weerar ku qaaday Masar kaddib markii hoggaamiyihii masar uu ku hanjabay inuu xasuuqii doono dalkaasi, Waxaana dagaalkaasi uu horseeday in Israa’iil ay la wareegto dhul badan oo ay kamid tahay gacanka Siinay, Qaza, Bariga Jerusalam iyo daanta galbeed.
Sannadkii 1976 ,ciidammada Koomaandooska Israa’iil waxay weerar lama filaan ah ku soo furteen 100 qof oo koox taabacsan Falastiin ay ku haysatay garoonka Entebe ee dalka Uganda. Lahaystayaasha ayaa dib loogu celiyay Israa’iil. Hoggaamiyaha koomandooska oo ah walaalka ra’iisul wasaaraha haatan ee Israa’iil ayaa hoowlgalkaasi ku geeriyooday.
Waxaa is gacan qaaday ra’iisul wasaarihii Israa’iil Yitzhak Rabin iyo hoggaamiyihii dhaqdhaqaaqa Falastiin Yasser Carafat sii heshiis looga gaaro coladda bariga dhexe. Sannadkii 1993, waxaa heshiis ku meel gaar ah lagu kala saxiixday Aqalka Cad ee Maraykanka.
Labo sanno kaddib, Rabin oo ahaa ra'iisal wasaarihii Israa'iil ayaa lagu dilay magaalada Tel aviv,waxaan dilay nin kasoo horjeeday heshiiska nabadda, Dilka Rabin ayaa waxaa uu Israa’iil ka dhaliyay qalalaaso.